नेकपा निकट राष्ट्रिय चिकित्सक संघ अब पनि एक ढिक्का ! | Nepali Health
२०७७ पुष २४ गते १८:३९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २४ पुस । नेकपामा आस्था राख्ने चिकित्सकहरुको संस्था राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल (एनडीएएन)ले आफूहरु एक ढिक्का भएरै अघि बढ्ने निस्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा शुक्रबार बसेको बैठकले आफ्नो माउ पार्टीमा विग्रह देखिए पनि एनडीएएन एकजुट रहने निस्कर्ष निकाल्दै संस्था थप बलियो बनाएर लैजाने निस्कर्ष निकालेको हो ।
एनडीएएनका अध्यक्ष डा सन्तोष पौडेलले आफूहरु एकजुट भएर संस्थाको सदृढिकरणमा लाग्ने बताए । ‘एनडीएएन मुख्यत प्रगतिशील बिचार बोक्ने चिकित्सकहरुको पेशागत संस्था हो । अहिले पार्टीमा देखा परेको विग्रह कुनै सैद्धान्तिक नभएको र कुन आधिकारिक भन्ने समेत निर्णय भइनसकेको अवस्थामा हामी कित्ताकाट गर्नु आवश्यक छैन भन्ने निस्कर्ष हो । बरु संस्थालाई थप मजबुत बनाएर लैजाने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।
बैठकमा एनडीएनका पदाधिकारी, उपत्यकामा रहेका सदस्य तथा सल्लाहकारको उपस्थिति थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्य र सल्लाहकारहरुले एनडीएन एक ढिक्का भएरै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएक थिए ।
एनडीएएन पूर्व एमाले पार्टी निकट चिकित्सकहरुको संस्था हो ।
माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपनि माओवादी केन्द्र र एमाले नजिक मानिने चिकित्सकहरुको संस्था एकीकरण भइसकेको थिएन ।
अहिले नेकपामा पूर्व एमाले भित्रको समूहबीच नै फाटो पर्दा एनडीएएनमा पनि फुट आउँछ कि भन्ने धेरैको अनुमान थियो । त्यसो त एनडीएनका केही पदाधिकारी तथा सदस्यहरु पनि केपी ओली पक्ष र माधव पक्ष भनेर बाढिएका छन् । व्यक्तिगत आस्था र बिचारमा जो संग नजिक भएपनि संस्थालाई भने एक ढिक्का राखेर अघि बढाउने निस्कर्ष भएको डा. पौडेलले बताए ।
दुई महिना भित्र सात प्रदेशमा खोप भण्डारण केन्द्र बनाउँदै सरकार, निर्माणको जिम्मा सेनालाई
कोरोनाबाट लेबनानमा १० चिकित्कसको मृत्यु, १५ आइसियुमा